Ireo toerana dimy ahazoana tombony amin'ny tsena rehetra. Martech Zone
Ireo toerana dimy ahazoana tombony amin'ny tsena rehetra
Talata, Febroary 23, 2010 Alahady, Martsa 24, 2013 Grant Lange
Tamin'ny fiainako teo amin'ny orinasa taloha dia talanjona foana aho amin'ny elanelana misy eo amin'ny olona nanao ny vokatra sy ny olona nivarotra azy ireo. Amin'ny maha-mpitsikilo sy mpamaha olana ara-tsosialy ahy, dia manandrana mitady fomba foana aho handaminana ny elanelana misy eo amin'ireo mpanamboatra sy ireo mpivarotra. Indraindray nahomby ireo ezaka ireo, indraindray kosa tsy nahomby. Saingy nandritra ny fiezahana namaha ny fiasan'ny orinasa niasako dia nifanena aho tamin'ny zavatra inoako fa fahamarinana manerantany momba ny marika sy ny fampandrosoana ny vokatra.
Ny fahamarinana voalohany, Brand Focus, hoy ny fanazavana Eto.
Ny fahamarinana faharoa, Toerana misy ny sokajy, dia ny fomba ifaninananan'ny orinasa eo amin'ny tsena, ary ny fomba hitondran'ny toerana eo an-tsena fahombiazana. Ny manaraka dia fanazavana fohy momba an'io hevitra io, miaraka amin'ny ohatra amin'ny toerana tsirairay. (fanamarihan'ny mpanoratra: mino aho fa ny fototr'io fahamarinana io dia avy amin'ny boky novakiana nandritra ny fivoarako manokana, ka raha mahazatra izany, raha ianao no mpanoratra ny boky, azafady mba ampahafantaro ahy. nanandrana aho hahita ny loharano niaviako nandritra ny roapolo taona)
Microsoft, amin'ny maha orinasa lehibe iraisam-pirenena azy, dia mifaninana hatraiza hatraiza. Amin'ny ankamaroan'ny vokatra vokariny dia tsy ny fizarana tsena ihany no ananany fa ny saika ny tsena iray manontolo. Na izany aza, any amin'ny faritra sasany dia faharoa, fahatelo na fahefatra lavitra izy ireo. Fa maninona no izao? Na dia valiny lava sy teknika aza ny valiny feno, tsotra ny valin'ny haavon'ny mpanjifa: sokajy fa tsy marika, mamaritra ny fahombiazana eo amin'ny tsena.
Sokajy iray, voafaritra tsotra izao, momba ny sokajin'ny mpampiasa anao momba ny vokatrao. Raha nanontany anao aho hoe inona ny karazana vokatra Windows XP, dia azo inoana fa hiteny amiko ianao hoe: Rafitra miasa?. Ka ny Operating System no ho sokajy ho an'ny vokatra, ary Microsoft hanjakazaka mazava tsara ilay sokajy.
Fa rehefa asehoko anao ny Zune iray ary angatahiko ilay sokajy dia mety hiteny amiko ianao MP3 Player. Mazava fa very ity sokajy ity amin'i Apple. Fa maninona i Microsoft no misafidy ny hifaninana eto akory, nefa mazava fa manjaka tokoa i Apple? Hay, misy ny vola azo raisina ho isa tsara roa na dia lehibe aza ny isa voalohany. Raha ny marina dia misy toerana dimy samihafa amin'ny sokajy ahazoana tombony, raha hainao ny mampiasa azy ireo.
Ireo toerana sokajy dimy ahazoana tombony
Ny toerana dimy ahazoana tombony ho an'ny sokajy tsena rehetra dia Ny mpitarika ny tsena, Ny faharoa, Ny safidy, Ny Boutique, ary ny Mpanaraka sokajy vaovao. Amin'ny tsirairay amin'ireo toerana ireo dia azo atao ny mahazo vola, ary azo atao ny mitombo. Saingy manaraka ny tsy azo atao ny mifindra toerana iray amin'ny toerana hafa raha tsy misy fanampiana avy any ivelany.
Ao amin'ny sary etsy ambony, ny toerana tsirairay dia nalaina tamin'ny toerany sy ny habeny. Araka ny voamarikao dia kely dia kely kokoa ny habeny. Ka maninona no eo akaikin'ny tsy ahafahana mihetsika? Satria rehefa kely dia kely noho ny eo alohany ny toerana tsirairay, ny fampiasam-bola takiana amin'ny fanovana toerana dia mihoatra ny tombony azo amin'ny fanovana.
Andeha hojerentsika tsirairay avy ny toerana tsirairay, hahitantsika ny fahasamihafana eo amin'ny toerana tsirairay. Ho an'ity fampiharana ity dia azontsika atao ny mampiasa ny sokajy cola, satria azon'ny ankamaroan'ny olona izany.
Toerana voalohany: ny mpitarika ny tsena
Coke, mazava ho azy, no mpitondra. Na aiza na aiza izy ireo, ary angano ny tombom-bolany. Ohatra lehibe amin'ny mpitondra izy ireo. Ary satria manana mpifaninana matanjaka toy izany izy ireo ao amin'ny Pepsi, dia tena tsy afaka manana fizarana tsena intsony izy ireo. Ka ny hany safidin'izy ireo hivoatra dia ny miditra amin'ny tsena vaovao. Nahoana? Satria mora vidy kokoa ny manokatra fizarana an'i Shina noho ny manaisotra an'i Pepsi hiala ny Safeway.
Toerana faharoa: ny faharoa
Pepsi dia Faharoa matanjaka. Izy ireo koa dia hatraiza hatraiza, ary tena heverina ho ny solon'ny Coke tokana. Ka ahoana no itomboany? Lafo sy sarotra ny mandray anjara lavitra an'i Coke, saingy mora kokoa sy mora kokoa ny miditra any Shina herintaona aorian'ny coke. Nesorin'izy ireo ny fitomboan'ny sokajy Coke.
Toerana fahatelo: ny safidy
Amin'ny faritra sasany amin'ny firenena RC Cola no Alternative. Saingy tsy misy na aiza na aiza izy ireo, ary tsy manana ny herin'ny marketing an'ny roa lehibe. Ka ahoana no itomboany? Faritra isaky ny faritra. Izy ireo dia mikendry ireo fantsona manokana ahafahana mahita azy ireo ho eo an-toerana na tsy manam-paharoa ary mitombo? Isam-baravarana ?.
Toerana fahefatra: The Boutique
Jones soda dia Boutique quintessential. Mivarotra cola izy ireo, fa Jones kosa tsy dia miresaka momba ny cola intsony, ary bebe kokoa momba ny traikefa cola. Ny cola dia avy ao anaty tavoahangy vera misy siramamy faran'izay madio, sary an-tsokosoko amin'ny marika, ary vidiny lafo. Mazava ho azy fa tsy fifaninanana mahazatra amin'ireo lehibe. Na izany aza dia mahazo tombony izy ireo ary manana mpanaraka mahatoky. Nahoana? Satria manome am-pahatsorana any amin'ny vondrona mpanjifa cola manokana izy ireo.
Toerana dimy: The New Category Leader (NCL)
Ka raha te hanakorontana sokajy iray ianao, ahoana no anaovanao azy? Raha izaho manokana dia hanontany ireo manam-pahaizana momba ny tsena ao ambadiky ny Red Bull. Nanangana empira iray manontolo izy ireo nilaza tamin'ny rehetra fa iza izy ireo? Tsy cola, fa angovo ?. Mazava ho azy fa tsy afaka nifaninana tamin'i Coke i Red Bull rehefa nanomboka izy ireo. Saingy azon'izy ireo natao ny nilaza tamin'ny olona ny sokajy hoe, angovo, fa tsara kokoa. Ary tsy mifaninana amin'i Cola ve izany? Nampiasain'izy ireo ny sokajy vaovaon'izy ireo hiditra amin'ny talantalan'ny magazay efa nandresy ny coke. Ary nanao izany izy ireo nefa tsy nifaninana tamin'i Coke na i Pepsi.
Tsara, koa maninona no maninona izany?
Fanontaniana tsara. Ary ny valiny dia tonga amin'ity: raha fantatrao ny toerana misy anao dia hainao ny mifaninana tombony. Raha tsy fantatrao ny toerana misy anao dia azo inoana fa hamidy orinasa, marketing, na drafitra fitomboana izay handany vola be ianao amin'ny fanandramana hamindra anao any amin'ny toerana tsy azonao. Ny tena zava-dehibe dia ny fahafantaranao ny toerana misy anao dia azonao atao ny mamolavola drafitra fandraharahana sy varotra izay miorim-ponenana ny tombom-barotrao ary mahazo taha avo dia avo.
Tags: famindram-bolatoerana marketingMpanaraka sokajy vaovaoNy safidyNy BoutiqueNy mpitarika ny tsenaNy faharoa
Grant Lange dia iray amin'ireo mpikambana mpanorina ny Evidence Studio, fiaraha-miasa marika sy fampandrosoana ny vokatra. Miara-miasa amin'ireo orinasa na lehibe na lehibe izy mba hamolavolana drafitra fampivoarana ny marika sy ny vokatra mahomby.
Fanitsiana ny nomerika sy ny nentim-paharazana: Ny zavatra madinidinika dia zava-dehibe
Teknolojia marketing lehibe indrindra hatramin'izay
23 Feb 2010 tamin'ny 10:59 maraina
Tsara foana ny mamerina ary tena tiako ilay famelabelarana - Vita tsara ary mazava ho azy fa Boutique aho 🙂
Febroary 24, 2010 amin'ny 1:54 PM
Ny fikorontanana iray mahaliana dia ny hoe—miankina amin'izay tadiavin'ny mpividy—dia afaka manana andraikitra samihafa ianao. Ohatra, i Jones no mpilalao manan-danja amin'ny boutique / craft / sodas premium, fa mazava ho azy ny boutique rehefa jerena manohitra coke.
Izany no mahatonga ny asantsika ho mahaliana.